Lafo-Khafiif - Rickets - Somali Kidshealth
Lafo-Khafiif – Rickets
14/05/2013 14/05/2013 by admin
Cuddurka lafo-khafiifka ama laatiinka lagu yiraahdo Rickets waa cuddur ku dhaca lafaha carruurta oo ka dhiga lafaha khafiif horseeda inay jilcaan, oo ay qalloocsamaan ama qaabdarro ku dhacdo. Cuddurkaani wuxuu yimaadaa marka jirka ilmaha ay ku yaraadaan Fitamiin D iyo macdahaha kaalsiyamta(calcium) iyo Fosfaytka(phosphate). Macdanahaan iyo Fitamiin D waxaa laga helaa cuntooyinka ukunta, kalluunka, loowska, subaga iyo caanaha. Fitamiin D wuxuu jirka ka caawiyaa in la dheefsado macdaha lafaha laga sameeyo ee Kaalsiyum iyo Phosfayt.
Marka ay timaado nafaqo-darro iyo shuban ama matag muddo dheer socda, waxaa jirka ku yaraada macdanahaas muhiimka u ah dhismaha lafaha carruurta koraysa. Fitamiin D waxaa si dabiici ah loogu sameeyaa maqaarka ama oogada jirka. Marka falaaraha qoraxdu ku dhacaan jirkeena ayaa fitamiin D loo badalaa nooc macdan ah oo jirka ka samaysto macdanihii lafaha lagu xoojinayay.
Carruurta uu haleelo laf-khafiifku waxaa ku dhaca inaysoo baxaan callaamado lafaha qalqaloociya ama qaabka lafta badala sida hogfaha, dalbaha, gacmaha lafahooda oo qalloocsama, laf-dhabarta oo jalleec yeelata iyo lafta naaska oo soo taaganta.
Raajo muujinaysa Lafo-khafiif horseeday Hogfo – courtesy of wikipedia.com
Maxaa keena lafo-khafiifka
Nafaqo-darro keenta in la waayo macdanaha lafaha dhisa iyo Fitamiin D
Jirrooyin ku dhaca habka sifaynta kelyaha oo keena in macdanihii Kaalsiyum iyo phosphate kaadida la raaciyo.
Jirro la iska dhaxlo oo keenta in kelyuhu miisaami waayaan macdanta foosfaytka oo kaadi ahaan loo saaro.
Calaamadaha lagu garto Lafo-qallooca
Korriinka ilmaha oo hoos u dhaca
Xannuun lafaha dhabarka, miskaha iyo lugaha
Kala-goysyada gacmaha iyo cirbaha oo xajmigoodu waynaado
Murqaha oo wiiqma ama debca
Lugaha ilmaha oo hogfo yeesha sida qaansada oo gudaha u godma ama dalbo laguhu kala leexdaan
Lafta dhabarka oo leexo yeelata iyo lafta naaska oo soo buurata.
Soo bixida ilkaha ilmaha oo baaqata ama ilkuhu si qaabdaro ah u soo baxaan.
Sidee loo daaweeyaa lafo-qallooca
Daawaynta lafo-khafiifidu waxay ku xiran tahay sababta keentay in lafuhu khafiifaan in la ogaado . Tusaale ahaan, haddii cilladu ka timid kelyaha oo macdanihii lafaha xoojinayay kaadi ahaan u saaraya waxay u baahan tahay in la daaweeyo dhibta kelyaha ka jirta. Sidoo kale, haddii ay ka timid lafo-khafiifku nafaqada ilmaha oo ay ku yar tahay Vitamiin D , kaalsiyumta iyo fosfaytka waxaa loo baahan yahay in ilmaha la siiyo cuntooyinka laga helo Fitamain D iyo macdanaha kale. Waxaa cuntooyinkaas ka mid ah kalluunka, ukunta, sallida Cod liver, loowska, subaga iyo caanaha.
Haddii xaaladu degdeg tahay waxay carruurtu u baahan yihiin daawayn Fitamiin D ah oo ilmaha la siiyo. Daawooyinka Sharoobooyinka ama Kiniinada la yiraahdo Multivitamins waxay ka kooban yihiin inta badan Fitamiino badan iyo macdano jirku u baahan yahay sida Vitamin D iyo macdaha Kaalsiyum iyo foosfayt,
Waxaa kale oo muhiim ah in carruurtu hesho iftiinka qoraxda, oo jirkooda qoraxda la tuso cabaar maalintii, si jirku si dabiici ah ugu samaysto Fitamiin D.
Carruurta lafahu qallocsameen ama qaabdarro ku dhacday lafaha waxay u baahan karaan in qalliin lafaha lagaga sameeyo si loo saxo hab-dhismeedka lafaha ee qaldamay.
Posted in Lafaha - Murqaha - Xubnaha
PrevQaama-qashiir – Mumps